Mpamily taxi-brousse Any amin’ny Fokontany no maka fanampiana
Nikatona tanteraka nanomboka omaly ny tobim-piantsonana eto an-drenivohitra mandra-pisian’ny lamina vaovao avy amin’ny Fitondram-panjakana.
Ankoatra ny etsy amin’ny Maki Andohatapenaka dia tafiditra ihany koa ny eny Androndrakely sy ny fasan’ny karana, toerana anisan’ny be olona tokoa. Nambaran’ny lehiben’ireo tobim-piantsonana nandritra izany fa tsy azo hivezivezena intsony ireny toerana ireny. Hisy mantsy asa fanadiovana faobe hotanterahina. Ankoatra izay hoy izy dia tsy mila mitady ny lehiben’ny koperativa misy azy intsony ireo mpamily taxi-brousse sy ny mpanampy azy amin’ny anjara fanampiana tokony ho azon’izy ireny. Any amin’ny komity loharano ny rehetra hoy izy no maka izany, izany hoe : eny anivon’ny Fokontany misy azy, hisian’ny filaminana. Tsiahivina moa fa na ho an’ireo mpamily fiara karetsaka sy taxibe aza dia mbola betsaka ireo tsy nahazo izany fa miandry fiantsoana.